နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ Pterostilbene Resveratrol Vs, သင်နှစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ပျောက်ဆုံးနေသည့်အချက်အလက်များစွာရှိသည်ကိုသင်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မည်။ ကျန်းမာသောဘ ၀ တစ်ခုတွင်နေထိုင်ရန်သင့်တော်သောအစားအစာကိုမှတ်ချက်ပေးရန်လိုအပ်ပြီးသင့်လျော်သောဆေးဝါးများနှင့်အတူလေ့ကျင့်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည်၊ သို့သော်အာရုံကြောဆိုင်ရာပြproblemsနာများကဲ့သို့သောပြproblemsနာအချို့ကျန်ရှိနိုင်သည်။
ထို့အပြင်သင်ဖြည့်စွက်ပါရှိသောကြောင်းနားလည်သင့်ပါတယ် Pterostilbene နှင့် Resveratrol သင်အချို့ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ကူညီနိုင်သည်။ ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများသည် ၄ ​​င်းဒြပ်ပေါင်းများကို ၄ င်းဆေးများကို၎င်းတို့ဖြည့်စွက်မှုများတွင်ထည့်သွင်းထားသဖြင့်သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် pterostilbene အသက်ရှည်ခြင်းနှင့် pterostilbene resveratrol သတင်းရင်းမြစ်ကိုဖြေရှင်းနေစဉ်ထို့ကြောင့်, ငါတို့အသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရကြလိမ့်မည်
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလူအများစုက၎င်းသည်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိနိုင်ကြောင်း တိုက်တွန်း၍ အနီရောင်ဝိုင်ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ရှင်းပြနိုင်ခြင်းမရှိပါက၎င်းကုထုံး၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုမည်သို့အကျိုးပြုသည်ကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်စပျစ်ဝိုင်နီနှင့်ပတ်သက်သည့်သုတေသနအမြောက်အများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသင်သဘောပေါက်လာပြီး၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးကိုအကျိုးပြုသည့်ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးပါဝင်သည်မှာရှင်းနေပါသည်။
ဝိုင်နီကိုစပျစ်သီးအသီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Resveratrol သည် ၄ ​​င်း၏တက်ကြွသောဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Resveratrol သည် polyphenol ဟုလူသိများပြီး stilbenoid ဟုလူသိများသောအုပ်စုတစ်ခုမှလာသည်။ သင်ဟာ Resveratrol ကို ၀ ိုင်ထဲသာရနိုင်သည်မဟုတ်သော်လည်းအခြားသဘာဝအရင်းအမြစ်များတွင်မြေပဲနှင့်သစ်သီးများလည်းပါဝင်သည်။ သို့သော်ဝိုင်သည်သင်အကြိုက်ဆုံးသောက်စရာမဟုတ်လျှင်သင်ဝယ်နိုင်သည် အကောင်းဆုံး resveratrol ဖြည့်စွက် ရရှိနိုင်ပါ။
Pterostilbene Vs Resveratrol နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သုတေသနအမျိုးအစားများစွာသည် Resveratrol ကိုဗဟိုပြုထားကြောင်းသင်သဘောပေါက်လိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းဒြပ်ပေါင်းများသည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်တူညီသော်လည်းလူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်မတူကွဲပြားသော်လည်းကျန်းမာရေးအတွက်မူ Pterostilbene ၏အကျိုးကျေးဇူးများသည် Resveratrol ၏အကျိုးကျေးဇူးများထက်ပိုများနိုင်သည် သို့သော် Pterostilbene သည်သဘာဝဓါတ်တိုးဆေးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ဘလူးဘယ်ရီတွင်တွေ့ရှိရသည်။ အခြား pterostilbene အရင်းအမြစ်များမှာပိုးမွှားများ၊ ဗာဒံသီးစသည်တို့ပါဝင်သော်လည်းအရေအတွက်နည်းပါးသည်။ ထို့အပြင် Resveratrol နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောစုပ်ယူမှုနှုန်းနှင့်ဓာတ်တိုးခြင်းဂုဏ်သတ္တိများကိုမြင့်မားစေသည်။ ထို့အပြင်သင်တစ် ဦး မဝယ်နိုင်ပါ Resveratrol ဖြည့်စွက် အကယ်၍ သစ်သီးများရရှိခြင်းသည်သင့်အတွက်ပြbeနာဖြစ်နိုင်သည်။
Pterostilbene V Resveratrol, မှန်ကန်သောသောက်သုံးသောဘာလဲ
မည်သည့်သောက်သုံးသောပမာဏသည်မှန်ကန်သည်ဆိုသည့်မေးခွန်းသည်ထိုဒေသရှိလူအများအတွက်သိသာသောစိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ သို့သော်အချို့သောဖြည့်စွက်ဆေးများသည် Pterostilbene သို့မဟုတ် Resveratrol တွင်အခြားသူများထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုရှိကြောင်းကိုလည်းနားလည်ရန်လက်တွေ့ကျသည်။ ဒါကြောင့်သင့်တော်မှုကိုမဆုံးဖြတ်ခင်သင့်ရဲ့အားသာချက်ကိုသင်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်ဝိုင်နီတစ်ခွက်ကိုသောက်သောအခါ 1 Resveratrol XNUMXmg ရရှိနိုင်ပါသည်။
ပုံမှန်သောက်သုံးသောပမာဏသိသိသာသာစိုးရိမ်စရာဖြစ်သော်လည်းရှုပ်ထွေးမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။ စီးပွားဖြစ် resveratrol သောက်သုံးသောမကြာခဏ 50 မှ 250mg အကြားဖြစ်ပါတယ်။ ဤအမျိုးအစားထက်ကျော်လွန်သောမည်သည့် resveratrol သောက်သုံးမှုများသည်အချို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Pterostilbene အနိမ့်ပမာဏ (blueberry အပေါ်အကြောင်းကို 0.03mg) တွင်အသီးပေါ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည် သင် resveratrol အမှုန့် suppliants ကိုအသုံးပြုလျှင်ထို့ကြောင့်, ကအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် Resveratrol နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်မြင့်မားသောဇီဝရရှိနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်အကောင်းဆုံး pterostilbene သောက်သုံးမှုသည်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် ၇ ရက်ကြာနေနိုင်သော်လည်းမသိရပါ။
Pterostilbene V Resveratrol ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ
Pterostilbene Vs Resveratrol ကိုအသုံးပြုသည့်အခါသင်အကျိုးခံစားခွင့်များစွာရှိပါသည်။ ဤဒြပ်ပေါင်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့စျေးကွက်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည့်အခြားဆေးဝါးများကဲ့သို့သေစေနိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမရှိကြပါ။ တစ်ခုစီကဘာကိုကမ်းလှမ်းရမလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
Resveratrol နှင့် pterostilbene ကင်ဆာအကျိုးကျေးဇူးများ
လူအများကပိုက်ဆံအများကြီးသုံးကြသည် ကင်ဆာဆေး သူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ငွေရေးကြေးရေးမထောက်ပံ့နိုင်တော့သည့်အတိုင်းအတာအထိ။ ထို့အပြင်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၊ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာနှင့်ရင်သားကင်ဆာကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားသောကင်ဆာပုံစံများလည်းရှိသေးသည်။ အစောပိုင်းအဆင့်များတွင်သေဆုံးမှုများကိုရှောင်ရှားရန်ကုသသင့်သည်။
Pterostilbene သည်ကင်ဆာဆဲ (လ်) များ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးပါသောအခန်းကဏ္ role မှပါ ၀ င်သည်။ ကျန်းမာသောဆဲလ်များကိုကင်ဆာဆဲ (လ်) များဖြစ်လာစေနိုင်သည့်အခြေအနေတစ်ခုထက်မကရှိသည်။ သို့သော် Pterostilbene သည်ဤဆဲလ်များကြီးထွားလာခြင်းကိုတားဆီးပေးပြီးကင်ဆာဆဲ (လ်) များကိုမိမိကိုယ်မိမိဖျက်ဆီးခြင်းကိုဖြစ်စေသည့် apoptosis ဟုခေါ်သောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်းစတင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်NFκBရောင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Resveratrol သည်အခမဲ့ဆဲလ်အစွန်းရောက်မှုများမှကိုယ်ခန္ဓာ၏သဘာဝကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်ကင်ဆာလူနာများကိုကူညီနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားအခမဲ့အစွန်းရောက်ပထမအဆင့်အတွက်ကင်ဆာဆဲလ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
Resveratrol နှင့် Pterostilbene ၏နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများ
ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသည်ကားကိုထိန်းချုပ်သောအင်ဂျင်နှင့်တူသည်။ အကြားအာရုံသည်အလုပ်မလုပ်ပါကသွေးစီးဆင်းမှုကိုလျှော့ချလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာပြcomplနာများပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများအရ Pterostilbene သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ (မကောင်းသောကိုလက်စထရောဟုလည်းသိကြသော) LDL အဆင့်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ နှလုံးပြproblemsနာများသည်သွေးတွင်ကိုလက်စထရောအဆင့်များများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့်ဤအဆင့်များကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။
Resveratrol သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်သွေးတိုးကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်နာတာရှည်နှလုံးရောဂါများမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်သွေးလွှတ်ကြောများ၌ပလိပ်ရောဂါမဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်းဖြင့်သွေးကိုထိရောက်စွာစီးဆင်းစေသည်။ သွေးသည်ထိရောက်စွာစီးလာသည်နှင့်အမျှနှလုံးပြproblemsနာများ၏အခွင့်အလမ်းများကိုလျှော့ချပေးသည်။
ကိုယ်အလေးချိန်အလွန်အကျွံရှိခြင်းသည်အဝလွန်ခြင်းကဲ့သို့သောပြproblemsနာများနှင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်အချို့သောပေါင်များကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောပြissuesနာများကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီနိုင်သည်။ Resveratrol သည်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှုန်းကိုမြှင့်တင်ပေးသောကြောင့်သင်၏ခန်ဓာကိုယ်သိုလှောင်ထားနိုင်သည် အဆီ။ ထို့ကြောင့်သင်အလေးချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်လိမ့်မည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်သင်သည်သင်၏ပစ်မှတ်ပုံသဏ္obtainingာန်ကိုရရှိသည်။ ထို့အပြင်အေရိုးဗစ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်လာခြင်းဖြင့်သင်သည်ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်ညွှန်းကိန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ အလားတူစွာ Pterostilbene သည်ကိုလက်စထရောအဆင့်ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အလေးချိန်ကိုလျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းကိုပေါင်းစပ်ရန်မအကြံပြုပါ ကိုယ်အလေးချိန် ဒီဖြည့်စွက်နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးများ
Pterostilbene နှင့် Resveratrol ၏သိမှုအကျိုးကျေးဇူးများ
ဦး နှောက်တွင်အခမဲ့အစွန်းရောက်များရှိနေခြင်းကအိုမင်းခြင်းဖြစ်စဉ်တိုးပွားခြင်းနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကဲ့သို့သောအခြေအနေများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အသက်ကြီးသူအများစုသည်မှတ်ဉာဏ်နှင့်ကြားနာခြင်းကဲ့သို့သောပြproblemsနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအခြေအနေများသည် neurodegeneration နှင့်ဆက်စပ်သော်လည်း Pterostilbene နှင့် Resveratrol အစားအစာများသည်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး resveratrol ဖြည့်စွက်ဆေးကိုစားသုံးခြင်းသည်အိုမင်းခြင်း၏သက်ရောက်မှုများကိုကျော်လွှားရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် Resveratrol သည်အင်ဆူလင်ကဲ့သို့သောကြီးထွားနှုန်းအချက် ၁ ကိုတိုးပွားစေသည်။ ဤရွေ့ကား peptides ဦး နှောက်အပေါ်အာရုံခံ (neurogenesis) နှင့်သွေးကြောများ (angiogenesis) ၏ကြီးထွားမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်သိမြင်မှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေ။
၎င်းဒြပ်ပေါင်းသည်သိမှုဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Pterostilbene အားဖြင့်ပုံမှန် Edging ဖြစ်စဉ်များကိုခွင့်ပြု, အစွမ်းထက် neuromodulator အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဦး နှောက်ဆဲလ်များနှင့်အာရုံကြောများကိုကာကွယ်ပေးသည်၊
စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက် Pterostilbene နှင့် Resveratrol
စိတ်ဓာတ်မြင့်မားခြင်းကသင့်အားစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆိုင်သောပြfromနာများမှကာကွယ်ပေးသည် စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက်ကုသမှုနည်းလမ်းများရှိသော်လည်း Pterostilbene စိုးရိမ်စိတ်ကိုကုသနိုင်ပါတယ်စိတ်ကျရောဂါနှင့်အခြားပြissuesနာများ။
ကြွက်များသည် Pterostilbene ကိုမည်သို့တုန့်ပြန်သည်ကိုရှာဖွေရန်ရွေးချယ်သောလေ့လာမှုသည် amygdala နှင့် hippocampus ဟုခေါ်သော ဦး နှောက်အစိတ်အပိုင်းများတွင်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုများပြားစေသင့်သည်။ ဤရွေ့ကားစိတ်ဓာတ်, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောရှိသည်သော ဦး နှောက်၏အရေးပါသောဒေသများဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်လေ့လာမှုက Pterostilbene သည်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါတို့ကိုကုသရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
Resveratrol အမှုန့် စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုပြproblemsနာများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည့်အခါကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်းအလားအလာရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သိပ္ပံပညာအနေဖြင့် Endocannabinoid နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော receptors နှင့် hormones များကိုထိန်းညှိပေးသည်။
ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်မြင့်မားစွာပါဝင်သောအစားအစာကိုစားသောအခါအမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကာဗိုဓာတ်မြင့်မားစွာပါဝင်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ divest ကိုဖြစ်စေသည့်အပြင်အင်ဆူလင်ကိုထိခိုက်စေသည်။ သင်အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှခန္ဓာကိုယ်သည်အင်ဆူလင်ဓာတ်ပိုမိုသိရှိလာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်အင်ဆူလင်အာရုံခံမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
သို့သော်အချို့သောလေ့လာမှုများအရ Pterostilbene အစားအစာများကိုစားခြင်းသည်သင်၏ဘ ၀ ၌အပြုသဘောဆောင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် Peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR-α) သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည်အစာရှောင်ခြင်းနှင့် ketogenesis စတင်ခြင်းကိုမည်သို့ထိန်းချုပ်သည်ကိုထိန်းချုပ်ပေးသော။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Pterostilbene PPAR-αဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမြှင့်တင်ပေးတဲ့အတွက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအဆီတွေများများလောင်ကျွမ်းစေပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသကြားဓာတ်အဆင့်ကိုလျှော့ချပေးတယ်။ Resveratrol လေ့လာမှုများကိုလက်ရှိပြုလုပ်နေသော်လည်း Type II Diabetes နှင့် Resveratrol သက်သာခွင့်များအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်နွှယ်မှုမရှိပါ။
Pterostilbene နှင့် Resveratrol ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Pterostilbene သို့မဟုတ် Resveratrol ပါသည့်မည်သည့်ဖြည့်စွက်ဆေးကိုမဆိုမသုံးစွဲမီ၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုသင်ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ ၎င်းဒြပ်ပေါင်းများအားလေ့လာမှုကိုဓာတ်ခွဲခန်းတွင်အများဆုံးပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး Pterostilbene နှင့် Resveratrol ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုများသောအားဖြင့်တွေ့ရှိရသည်။ Resveratrol ပိုမိုမြင့်မားသောသောက်သုံးမှုကသင်၏ကျန်းမာရေးကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ ပျော့ပျောင်းသောသက်ရောက်မှုများကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်၊ သို့သော်စနစ်တကျစွဲမြဲတည်ရှိနေပါကသင့်ဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုသင့်သည်။ သို့သော် Resveratrol ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ LDL ကိုလက်စထရောပမာဏပိုမိုများပြားလာကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ Pterostilbene V Resveratrol, သင်သည်အမျိုးမျိုးသောအချက်များထွက်တွက်ဆရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ဦး စွာ၊ အချို့သောအစီရင်ခံထားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်ကြောင်းသင်သိသင့်သည်။ ဒုတိယအချက်အ Resveratrol သောက်သုံးသောလိုအပ်ချက်နှင့် Pterostilbene ၏နှိုင်းယှဉ်။ ထို့အပြင်သောက်သုံးသောပမာဏကိုနားလည်ခြင်းသည်သင်ယူသင့်သောဒြပ်ပေါင်းပမာဏကိုသိရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်။ တတိယအချက်အနေဖြင့်ဒြပ်ပေါင်းများ၏ရရှိနိုင်မှုသည် ပို၍ အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်ပြီးသင်ပိုမိုမြင့်မားသောရရှိနိုင်မှုနှုန်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံး resveratrol ဖြည့်စွက်မှုရရှိနိုင်ကြောင်းသင်သိသောအခါ Pterostilbene အတွက်များစွာပေးဆပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အရင်းအမြစ်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ စျေးကွက်တွင် resveratrol ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်သည်ကိုငါတို့သိသော်လည်းအရည်အသွေးနိမ့်သော်လည်းသစ်သီးဝလံများတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါက၎င်းကိုကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြစ်သင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
Langcake, P ။ ; Pryce, RJ (1977) ။ "စပျစ်ပင်မှ phytoalexins အမျိုးအစားအသစ်" ။ အတွေ့အကြုံ။ 33 (2): 151-2 ။ Doi: 10.1007 / BF02124034 ။ PMID 844529 ။
Rimando လေး, Kalt W, Magee JB, Dewey J, Ballington JR (2004) ။ “ ကာကွယ်ဆေးထိုးသီးများတွင် Resveratrol, pterostilbene နှင့် piceatannol” J ကို Agric စားနပ်ရိက္ခာ Chem ။ 52 (15): 4713-9 ။ Doi: 10.1021 / jf040095e ။ PMID 15264904 ။
Macmillan-Crow LA၊ Cruthirds DL; Cruthirds (Aprilပြီလ 2001) ။ "ဖိတ်ကြားထားသောပြန်လည်သုံးသပ်: ရောဂါအတွက်မန်းဂနိစ် superoxide dismutase" ။ အခမဲ့ Radic ။ Res ။ 34 (4): 325-36 ။ Doi: 10.1080 / 10715760100300281 ။ PMID 11328670 ။
Sahebkar A၊ Serban C၊ Ursoniu S, Wong ND, Muntner P, Graham IM, Mikhailidis DP, Rizzo M, Rysz J, Sperling LS, Lip GY, Banach M (2015) ။ "ကို C- တုံ့ပြန်ပရိုတိန်းအပေါ် resveratrol ၏ထိရောက်မှု၏မရှိခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ထားသည့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်အချက်များ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ကျပန်းထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်မှုတွေ၏ meta-analysis သည်" ။ Int ။ ဂျေ Cardiol ။ 189: 47-55 ။ Doi: 10.1016 / j.ijcard.2015.04.008 ။ PMID 25885871
3.Postostilbene V Resveratrol, မှန်ကန်သောသောက်သုံးသောဘာလဲ
4. Resteratrol ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ
5.Resveratrol နှင့် pterostilbene ကင်ဆာအကျိုးကျေးဇူးများ
Resveratrol နှင့် Pterostilbene ၏ 6.Cardiovascular အကျိုးကျေးဇူးများ
Pterostilbene နှင့် Resveratrol ၏ 8. သိမှုအကျိုးကျေးဇူးများ
စိုးရိမ်မှုများအတွက် 9.Pterostilbene နှင့် Resveratrol
10. အမျိုးအစား II ကိုဆီးချိုရောဂါ
11. Pterostilbene နှင့် Resveratrol ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Anandamide (AEA) - သင်သိထားသင့်တဲ့အရာအားလုံး